Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa Barnoota dhaabuuf dirqaman. – Kichuu
#OromoRevolution Mudde 5/2017 Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa Barnoota dhaabuuf dirqaman.
Uummata keenyaa dangaalee Oromiyaa Bahaa Harargee, Kibbaa Oromiyaa Boorana, Kibbaa Bahaa Oromiyaa Gujiifi Baalee Waraanaa liyyuu hayilii Somaaleefi waraanaa makalakiyaa wayyaaneetiin qe’eetti itti fufinsaan ajjeefamaa jira, qe’eef qabeenyaa isaaniirraa irraa buqqifamuun hiraarsa ulfaataa keessatti argaman akkamitti nagaan teenyee barachuu dandeenya jechuun guyyaa har‘a banoota dhaabanii mooraa gadhiisanii bahaa jiru. Ejjennoo isaanii kana rakkoo ulfata Oromiyaan keessa jirtuuf furmaatni waaraan dhufuu qaba jechuun barnoota dhaabuuf dirqaman.
– Akkasumas itti dabaluun gaaffii mirgaa abbaa biyyummaafi kabajamuu mirga keenyaaf gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba.
-shirri COC gaaffii mirgaa ittin ukkamsuuf kan dabballootaa wayyaaneen itti yaadamee qopheeffame waan ta’eef atattamaan haqamuu qaba.
-uummatni keenya 6500,000 0litti lakkaawaman qe’eef qabeenyaa isaanii irraa buqqifamuun haala ulfaataafi rakkisaa keessatti dirmannaa uummataa qofaan lubbuun jiraachifama jiruu waan ta’eef uummata keenyaafi Maatii keenya haala rakkisaa keessa jiru sammuu ittin obsinee barannu hin qabnu. Kanaafuu furmaatni atattamaa uummata keenyaaf kennamee bakka nageenya, fayyaa fi jiruuf jireenyaaf amansiisa ta’ee hanga qubsifamanitti barachuuf haamilee hin qabnu!!
Ummatni Oromoo miliyoonatti lakkaawamu badii tokko malee Oromummaan hidhamee manneen hidhaa biyyatti garaagaraa keessatti hiraarfamaa jiru atattaman hanga gadi lakkifamanitti sammuun keenya tasgabaa’ee barachuu hin dandeenye.
waraanni wayyaanee Agaaziin, poolisiin federaalaa mooraa dhaabbilee barnootaa hanga gadi lakkisanitti wabii nageenyaa hin qabnu, waraanaan hiraarfamaa barachuu waan hin dandeenyeef yeroof barnoota dhaabuuf murtii kan fudhatan ta’uu maddi keenya ifa godhe jira.